डिएसपीको सातो खाँदै एसएसपी, ठमेलमा दुई नियम !
ARCHIVE, NEWSPAPER » डिएसपीको सातो खाँदै एसएसपी, ठमेलमा दुई नियम !
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी प्रमूख एसएसपी रविन्द्र धानुकले आफू मातहत प्रहरी यूनिटका ईन्चार्जको सातो लिएका छन् । गैर कानुनी क्रियाकलाप गरे, लेनदेनका मुद्दा हेरे, सेवा ग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएमा र कतैबाट आर्थीक लाभ लिएमा कडा कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने भन्दै सातो लिएका हुन् ।
तत्कालिन समयमा एसपी रमेश खरेलको पालामा बन्द भएको लाईन खाने काठमाडौं प्रहरीको प्रचलन बिस्तारै शुरू भएको छ । रात्रीकालिन व्यावसाय देखि होटल र क्यासिनोबाट तत्कालिन समयमा बृत्त र प्रभागका ईञ्र्चाजले मासिक खाँदै आएका थिए । त्यो प्रचलन रमेश खरेलको आगमनसँगै बन्द भएको थियो । तर यहिले तीन बर्ष यता फेरि सुरू भएको चर्चा प्रहरी भित्रै छ । एसएसपी धानुकले कसैले कुनै व्यापारीसँग लाईन मिलाएर आर्थीक लाभ लिने जमाना गएको बताए । आफू मातहत कुनै प्रहरीले यस्तो हर्कत गरेको पाईएका कठा कारवाही गर्ने बताए ।
उता लैनचौर बृत्तका डिएसपी दिपक पोखरेलले पहिलाकै नियमलाई यथावत राख्दै डिस्को थेकलाई ४ र डान्सबारहरू दुई बजेसम्म नै सञ्चालन गर्न दिएका छन् । एउटै ठमेलमा कुनै बार १२ बजे नै बन्द गर्नु पर्ने कुनै दुई बजेसम्म खुल्ला रहने परिपाटीका कारण १२ बजे बन्द गर्नु पर्ने व्यापारीहरू मारमा परेको बताउँछन् । रेष्टुरेन्टको स्थलगत निरक्षण पश्चात मात्र समय बढाउने डिएसपी भारतीले उनका क्षेत्रका व्यापरीलाई जानकारी गराएको एक व्यापरीले बताए । तर दरबारमार्ग क्षेत्रमा रहेका केही डिस्को भने बिहान चार बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।